वास्तु दोषबाट बच्न घरको घडी कहाँ राख्ने ? | NepalDut
वास्तु दोषबाट बच्न घरको घडी कहाँ राख्ने ?
यदि तपाईं घरमा घडी समय हेर्नको लागि मात्र राख्नुभएको छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । बास्तु शास्त्रको अनुसार घडीले घरमा समय देखाउने मात्र होइन त्यो भन्दा महत्वपूर्ण काम गर्छ ।
भारतीय शास्त्रको बास्तु र चीनको फेन्ग शुई शास्त्रको अनुसार हाम्रो घरमा राखिएको घडीले हाम्रो भाग्यको बारेमा धेरै कुरा बताउँछ । शास्त्रको अनुसार घरमा घडी झुन्ड्याउँदा सही दिशामा राख्नु जरुरी छ ।